Mpanamboatra sy mpamatsy cartridge sivanina plastika - orinasa mpanamboatra cartridge sivaly China
Cartridge sivana ankasitrahana
Cartridge Filter Pleated Filter
Cartes Pens Pleated Filter
Cartridge Filter Pleated PVDF
Cartridge sivana membrane manify
Cartridge sivana vy
Cartridge Filter Pleated Stainless vy
Cartridge sivana maratra
Tester amin'ny fahamendrehana sivana
Cartridge sivana ambony mikoriana
Cartridge sivana pleated PVDF
Cartridge sivana PTFE Hydrophobic
Cartridge sivana PP (polypropylene)
Cartes sivana PES (Poly Ether Sulphone)
Cartridge sivana aforitra nylon
Cartridges sivana namboarina
Cartridge sivana membra Glass Firber
cartridge sivana ratra
Fonenana sivana vy tsy misy fangarony
cartridge sivana be mikoriana
mpanamarina ny fahamendrehana sivana
Cartridge sivana Titanium
Cartridge sivana karbonina
Ny cartridges andiany YCF dia vita amin'ny membrane hydropilic polyvinylidene fluoride PVDF, ny fitaovana dia manana fahombiazan'ny fanoherana ny hafanana ary azo ampiasaina maharitra amin'ny 80 ° C - 90 ° C. Ny PVDF dia manana fahombiazan'ny adsorption proteinina ambany ary mety indrindra amin'ny vahaolana mahavelona, ​​agents biolojika, filtration vaccine sterile. Mandritra izany fotoana izany dia manana ny fahombiazan'ny rotsakorana ambany sy ny fampifanarahana simika manerantany.
Ny media YWF series cartridges sivana dia membrane PTFE hydrophilic, afaka manivana solvent polar-concentration ambany. Izy ireo dia manana fampifanarahana simika manerantany, azo ampiharina amin'ny fanamorana ny solvents toy ny alcohols, ketones, ary esters. Amin'izao fotoana izao dia ampiharina betsaka amin'ny fivarotam-panafody, sakafo, indostrian'ny simika ary fitaovana elektronika izy ireo. Ny cartridges YWF dia mampiseho fanoherana hafanana tena tsara, azo ampiasaina imbetsaka amin'ny famonoana setroka an-tserasera na famonoana otrikaretina mahery vaika. Ireo cartridges YWF koa dia manana fahombiazan'ny fidirana an-tsehatra avo, antoka lehibe ary fiainana maharitra.
Ny haino aman-jery sivana amboaran-tsarimihetsika NWF dia membrane PTFE hydrophobic, azo ampiharina amin'ny sivana mialoha sy fanamorana ny entona sy solvent. Ny membrane PTFE dia manana hydrophobicity matanjaka, ny fahaizany manohitra ny fikaohon-drano dia 3,75 heny mahery noho ny PVDF mahazatra, ka mihatra amin'ny sivana mialoha ny sivana sy ny sivana mazava ary ny fanamorana ny fanalefahana, ampiharina betsaka amin'ny fivarotam-panafody, sakafo, indostrian'ny simika ary elektronika. Ny cartridges NWF dia mampiseho fanoherana hafanana tena tsara, azo ampiasaina imbetsaka amin'ny famonoana setroka an-tserasera na famonoana otrikaina avo lenta. Izy io koa dia manana fahombiazan'ny fidirana an-tsehatra avo, antoka avo lenta ary fiainana maharitra.
Cartridge Pleated Polypropylene
Ny cartridges sivana polypropylene dia namboarina tsara hampiasaina amin'ny fampiharana filtration kritika ao anaty sakafo, fanafody, biotech, ronono, zava-pisotro, labiera, semiconductor, fitsaboana rano ary indostrian'ny fizotran'ny fangatahana hafa.
Spun Bonded Filter Cartridges dia voaforona kofehy polypropylene 100%. Ireo kofehin-koditra dia namboarina tamim-pitandremana mba hamorona hakitroky ny gradien avy any ivelany ka hatramin'ny atiny anatiny. Ny cartridges sivana dia misy amin'ny endriny roa sy tsy misy kinova fototra. Ny rafitra ambony dia mijanona ho mifangaro na dia eo ambanin'ny fepetra miasa mafy aza ary tsy misy fifindra-monina media. Ny kofehin'ny polypropylene dia tsofina tsy tapaka amin'ny vovoka afovoany afovoany, tsy misy fatorana, resina na fanosorana.
0.45micron pp membrane plastika sivana malemy ho an'ny fitsaboana rano
Ny haino aman-jery sivanan-tsolika andian-tsarimihetsika HFP dia vita amin'ny fonon-tsolika poros PP misy porofo mafana, manolotra fahafaha-mitazona loto lehibe kokoa noho ny cartridges mahazatra. Ny mason-drakitra hierarchika dia natao ho tsara kokoa miandalana, hisorohana ny soritry ny cartridge tsy ho voasakana sy maharitra ny ain'ny serivisy amin'ny cartridges.
Ny cartridges andiany SMS dia vita amin'ny membrane PES hydrofilika nafarana. Manana ny fitoviana simika manerantany izy ireo, PH range 3 ~ 11. Ahitana fahombiazana avo lenta, antoka avo lenta ary fiainana maharitra, azo ampiharina amin'ny farmasia, sakafo, indostrian'ny simika, elektronika ary sehatra hafa. Alohan'ny hanaterana azy, ny cartridge tsirairay dia niaina fitsapana fahamendrehana 100%, mba hiantohana ny fahombiazan'ny sivana vokatra. Ireo cartridges SMS dia zakaina amin'ny etona miverimberina na famonoana otrikaretina mahery vaika.
Sombiny avo mitazona cartridge Polyethersulphone
H cartridges andiany HFS dia vita avy amin'ny Pura series hydrophilic asymmetric sulphated PES. Manana ny fitoviana simika manerantany izy ireo, PH range 3 ~ 11. Izy ireo dia misy fihenam-bidy lehibe, fahafaha-mitazona loto lehibe, ary androm-piainana maharitra, azo ampiharina amin'ny fivarotam-panafody bio, sakafo sy zava-pisotro & labiera ary sehatra hafa. Alohan'ny hanaterana azy, ny cartridge tsirairay dia niaina fitsapana fahamendrehana 100%, mba hiantohana ny fahombiazan'ny sivana vokatra. Ny cartridges HFS dia maharitra amin'ny etona an-tserasera miverimberina na fanesorana tosidra ambony, mahafeno ny fepetra takiana amin'ny GMP kinova vaovao.
0,22 micron pes membrane «cartridge sivana« pleated »ampiasaina amin'ny filtration ny akora simika
Ny cartridges an'ny NSS dia vita amin'ny Micro series hydrophilic asymmetric sulfonated PES. Manana ny fitoviana simika manerantany izy ireo, PH range 3 ~ 11. Izy ireo dia misy fihenam-bidy lehibe sy androm-piainana maharitra, azo ampiharina amin'ny fivarotam-panafody bio sy sehatra hafa. Alohan'ny hanaterana azy, ny cartridge tsirairay dia niaina fitsapana fahamendrehana 100%, mba hiantohana ny fahombiazan'ny sivana vokatra. Ny cartridges NSS dia maharitra amin'ny etona an-tserasera miverimberina na fanesorana tosidra ambony, mahafeno ny fepetra takiana amin'ny GMP vaovao.
Ny cartridges andiany EBM / EBN dia vita amin'ny membrane hydrophilic n6 sy N66 voajanahary, mora mandomando, miaraka amin'ny tanjaka sy ny hamafin'ny fihenjanana, ny famafana ambany, ny fahombiazan'ny fanoherana tsara, miaraka amin'ny fifanarahana simika manerantany, indrindra indrindra ho an'ny solvents sy fitration simika .
Cartridge sivana meltblown PP
Ny sivana PP meltblown dia vita amin'ny fibre superfine PP 100% amin'ny alàlan'ny famafazana hafanana sy fikorontanana tsy misy fametahana simika. Ny fibre dia raikitra an-kalalahana rehefa mihodina ny masinina, mba hamorona rafitra bitika-porous dimensional. Ny firafitr'izy ireo mandroso miandalana dia misy fahasamihafana amin'ny tsindry kely, fahafaha-mitazona loto maloto, fahombiazan'ny sivana ambony ary androm-piainana maharitra. Ny famafana PP meltblown dia afaka mamono amin'ny fomba mandaitra ireo solo-javatra mihantona, sombintsombiny ary harafesina amin'ny tsiranoka.
Ity cartridges sivana andian-dahatsoratra ity dia vita amin'ny fibre vera tena tsara, mampiseho fahaiza-mitazona loto be dia be, azo ampiharina amin'ny sivana etona mialoha ny entona sy ny rano. Noho ny fahafaha-mitelina proteinina ultralow, dia be mpampiasa koa izy ireo amin'ny fivarotam-panafody bio.
Bldg D, Jinxiongda Tech Park, Xingyuan Road, Datanglang Village, Dalingshan Town, Dongguan, faritanin'i Guangdong, Sina